Check Valves - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 12 များအတွက်စုစုပေါင်း Check Valves ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါမီးသတ်အဆို့ရှင် ART.8706 ကြေးဝါမီး Fighting Valve အရွယ်အစား: 2â€
ကြေးဝါနွေ ဦး ပေါက်စစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင်
ကြေးဝါနွေ ဦး ပေါက်စစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင် ART.8707 ကြေးဝါနွေ ဦး Check Valves အရွယ်အစား: 1/2 မှ "To4" မှ ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ - ကြေးဝါအဆို့ရှင်များ၊ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်: 1.6 mpa ရေအလုပ်လုပ်ဖိအား0င်မှ 100 100 အလုပ်လုပ်အပူချိန်မှ စင်ပြိုင်ပိုက်ချည် ISO228 / 1, BSP, NPT,...
Hot sale သောကြေးဝါ Check Valves
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar သို့ နိုးထအပူချိန်: -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ Woking အလတ်စား -...
အတုကြေးဝါလွှဲ Check Valve
အတုကြေးဝါလွှဲစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်ကြေးဝါအဆို့ရှင် KS-7030 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 4â€ရန်
USA Light Brass Gate Valves Solder အဆုံးသတ်သည်
အမှတ်တံဆိပ်: kingsir, JJD
ကြေးဝါတံခါးတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်ထားသည် Art.8016 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံး အရွယ်အစား: 1 / မှ 2,3 / 4,1 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊...
တာရှည်ခံကြေးဝါ Stop Valves များ
ကြေးဝါ Stop Valves များ အမည်ခံဖိအား: 10bar; အလုပ်လုပ်အလတ်စား - ရေ; အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -10 ° C မှ 120 ° C; Thread: ISO228 / 1, BSP, NPT စသဖြင့်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်း: တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် CW614N, CW617N,...
ဂလင်း Packings ကြေးဝါ Stop Valves
ကြေးဝါရေ Stop Valves
အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါ Stop Valves များ
Solder Cap နှင့်အတူကြေးဝါ Ball Valves များသည် Port လျှော့ချပေးသည်
Solder Cap နှင့်အတူကြေးဝါ Ball Valves များသည် Port လျှော့ချပေးသည် ART.8643 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Solder Cap နှင့်အတူ လျှော့ချဆိပ်ကမ်း အရွယ်အစား:3/ 8â€ ??, 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
Solder Ends နှင့်အတူ 1/2 လက်မကြေးဝါ Stop Valve
Check Valves ရေ Check Valves Gate Valves Angle Valves Bibcock Valve Gas Valves Stop Valves Shower Stop Valve